Dawladda Hoose ee Dubai oo Shaqadeeda ka Shaqeynaysa UAE
Published by Shirkadda Dubai City at December 17, 2017
Xirfadaha Dowladda ee Dubai
Dowladda Xirfad shaqo oo ku taal Dubai, Adigu waad tahay shaqo ka raadsato magaalada Dubai?. Habka ugu fiican ayaa ah in lala hadlo kooxdayada, Shirkaddayada waa shirkadda ugu dhaqsaha badan kobaca Bariga Dhexe. Waxaan nahay iyagoo ka caawinaya fuliyaasha inay shaqo cusub ka helaan Dubai. Waxaad ka heli kartaa shaqaale badan oo qoranaya Dubai. Hadaad shaqo ka raadineyso India iyo Pakistan. Shirkadeena waa habka saxda ah ee lagu helo a mustaqbalkiisa in UAE. Xirfadaha gudaha Dubai City leeyahay wanaag badan siyaabaha aad ku heli kartid shaqo ku jira Imaaraadka Carabta.
Waxaan ka caawineynaa xirfadlayaasha shaqo doonka in ay helaan Xirfadle Dawlada Dubai. Dhinaca kale, waxaad shaqo raadin kartaa a barnaamijka booqashada dhamaystiran oo dhamaystiran ee barashada iyo horumarka gudaha Shirkadaha Dowladaha. Sida ugufiican ee loo dardar galiyo howlaha waa in la fiiriyo waxyaabahayaga Akhbaaraadka ciyaarta ciyaarta ee Dubai. Marka, waxaad shaqo ka heli kartaa Shirkadaha Dawlada ee Dubai.
Shaqooyinka dowladda ee Dubai
Shirkadaha ugu Fiican ee Imaatinka Imaatinka ee Dalbashada !.
Shaqooyinka ku jira Shirkadaha Dawladdu leedahay ee dalka Isutagga Imaaraatka Carabta Emirates.
Shirkadaha ugu Fiican ee Dowladdu Ka Shaqeeyaan Dubai!
Shirkadaha Shirkadda Maalgalinta Batroolka Caalamiga ah
Batroolka Caalamiga ah Investment Shirkadda (IPIC) sida xaqiiqda dhabta ah ee shirkadan waxaa dhistay Dawladda Abu Dhabi. Intaa waxaa dheer, shirkad ayaa noqonaysa mid aad u caan ah warshadaha Shidaalka. Sidoo kale, shirkaddu waxay faahfaahisay tan cajiib ah Dubai shirkad u sameysa Go'aan Emiri ee 1984. Isla awaamirta IPIC ee ah inay maal gashanayso maalgashiga caalamiga ah ee Bariga Dhexe suuqyada warshadaha tamarta iyo tamarta.
Inkastoo tani ay run tahay shirkadaha dowladda ee UAE. Shirkadaha kale ee shirkadu waxay leeyihiin 100% saamiyada Suuqa IPIC. Dhanka kale, shirkadda ayaa magacaaba dhammaan xubno ka socda Dubai iyo Abu Dhabi oo ka mid ah agaasimeyaasha guddiga ee doonaya inay koraan IPIC. Qarniyaalkiina, waqti isku mid ah, IPIC waxaa lagu taageeray saamiyada saamiyada suuqyada ee Abu Dabi.
In kasta oo laga yaabo in tani ay noqon karto shirkadda runta ah ee hadda leh magaca MUBADALA. Isla mar ahaantaana shirkadda, yeelato beelo badan oo xirfadlayaal xirfad-doon ah. Waxay hadda ka heli karaan shaqo Mubadala. Ujeeddadan awgeed, shirkadda waxay leedahay khibradda ugu wanaagsan ee Maalgashiga Caalamiga ah ee Batroolka. Ujeedada koritaanka suuqa maalgashiga ee Dubai. Saraakiisha iyo shaqaalaha maamula safarka shaqo. Si aad uhesho qaab kale, waqtiga aad la wadaagto shirkad waxay kuu oggolaaneysaa inaad kobciso heer kasta oo leh shirkad. Faahfaahin dheeraad ah ka ogow waxa ay tahay inaad bilowdo batroolka iyo shirkad maalgelin sida Mubadala.
Xirfadlaha Dowladda ee Dubai - Geliyaan resumeygaaga to Mubadala.
Shaqooyinka Abu Dhabi Investment Council
Waxaa muhiim ah in la ogaado Golaha Maalgashiga Abu Dhabi waa shirkad dhalinyaro ah oo sii kordhaysa Bariga Dhexe. Waxa ugu horreeya ee la xasuusto in Golaha Maalgashiga Abu Dhabi uu noqon doono mid ka mid ah shirkadda ugu fiican iyo tan ugu sareysa ee 2019. Waxyaabahaas oo dhan waxaa loola jeedaa in shirkaddu ay horseed u tahay hay'ad maalgashi oo kaliya maaha Abu Dhabi laakiin sidoo kale adduunka oo dhan. Caddayn badan oo qasab ah taas waxaad awoodaa inaad shaqo hesho waxaa kula jira oo keliya dadaallada iskujira marka aad qoreyso CV. Dhanka togan ee qof kasta oo doonaya inuu raadsado xirfad. Mid kasta oo ka mid ah musharax kasta oo cusub, xubnaha shaqaalahooda ayaa kaa caawin doona inaad gaarto hadaf kasta.
Ku bilow dhisidda xirfaddaada Abu Dhabi
Xaqiiqdii, shirkaddu way tababartaa oo horumarisaa. Musharax kasta oo cusub si noqo karti muhiim u ah Bariga Dhexe.
Guud ahaan, Golaha Maalgashiga Abu Dhabi Maareynta iyo abaalmarinta ra'yiga. Kaalmooyinka waxqabadka guuleysta ee golaha degmada.
Tusaale ahaan, shirkaddu waxay aamminsan tahay inay isgaarsiinta shaqadu ka dhexeyso maareynta iyo shaqaalaha had iyo jeer u furna duulimaadka Hindiya.
Si loo xoojiyo dhaqanka shirkada waa hab fiican oo xoojinaya Adeegyada la-talinta ee Dubai.
Waxa ugu horeeya ee la xasuusto, kartida, maamul wanaaga iyo hamiga shaqo. Waa qiimo muhiim ah taas hagayaal murashaxiinta cusub ee hawsha maalinlaha ah.
In la tilmaamo Abu Dhabi Investment abuurista jawi la yaab leh oo shaqo doonka ah. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, shirkadan ayaa labadaba la yaabtay edbinta iyo xirfadlayaal casri ah oo leh MBA. Ka dib, Indian expats iyo dadka kale ee Aasiya. Isagoo ku taliyay inuu ku biiro shirkaddan musharax cusub. Si la mid ah hay'addan, waad kori kartaa. Xaqiiqdii, Shaqooyinka ay la leeyihiin Golaha Maalgashiga Abu Dhabi, shirkaddu waxay rumeysan tahay shaqaalaha halkii ay ka ahaan lahayd maareeyn kaliya. In kasta oo ay tani noqon karto shirkad dhab ah oo xirfad leh oo loogu tala galay dalxiisayaasha. Iyadoo ay weheliyaan shirkadaha kale ee maalgashiga, ayaa la gaari karaa ujeedooyin mihnadeed oo ballaaran.
Xirfadaha Shaqaalaha Dekadaha Abu Dhabi
Xaqiiq ahaan, Dekadaha Abu Dhabi waa shirkadda ugu fiican. Waxaa laguugu daray xafiisyo dhowr ah oo ku yaal Dubai waad la shaqeyn kartaa. In aan wax laga dhihi karo jagooyinka barnaamijka horumarinta ee Abu Dhabi. Marka la eego mustaqbalkiisa shirkadda Emirates had iyo jeer waa mid isha ku haya loogu talagalay dadka ajnabiga ah murashaxiinta. Dhinaca taban, waxaa jira xirfadlayaal badan oo xilliyeed ku soo biiraya kooxdooda. Marka sidaas uma fududa in sida ugu dhakhsaha badan loo bilaabo Xirfadlaha shirkadan Abu Dhabi.
Horumarinta cusub ee shirkadan ayaa la soo dhaweynayaa, shirkadu waxay leedahay mid aad u wanaagsan shaqooyinka loogu talagalay ardayda ka qalin jebisa jaamacadda Magaalada Abu Dhabi, Xirfadda dekeddu waxay caan ku ahayd sanado badan wadnaha Abu Dhabi. Musharax walba waa in lagu xasuustaa dhaqanka dekedaha maadama 2010 uu yahay midka ugu wanaagsan fasalka. Barnaamijka deeq waxbarasho ardayda wuxuu sii wadaa shaqaaleysiinta mashruucyada iyadoo diiradda la saaray doorarka farsamada ee Abu Dhabi.
Waa wax la yaab leh oo soo dhaweynaya muwaadiniintii iyo qarashkii Abu Dhabi. Waa dadaal shirkada Emirates ku dhisan oo leh niyad koox leh isla markaana jecel hamiga Bariga Dhexe. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo anshaxa shaqada waa furaha shaqada lagu helo. Jawi deg deg ah oo wali saaxiibtinimo ku dhex leh Bariga Dhexe iyo gaar ahaan suuqa shaqada Abu Dhabi. Si loo soo bandhigo deeqda aasaasiga ah waxay sameyneysaa qorshe abaalmarin wanaagsan oo hubinaya mushahar wanaagsan. Si la yaab leh shaqaalaynta shirkaddu waa qadarin dhammaan xubnaheena kooxda ku soo biiri doonta.
Xirfadaha Dowladda ee Dubai. Fadlan Ku soo biir Dekadaha Abu Dhabi ururka shaqooyinka banaan ee hadda jira.
Shaqada Abu Dhabi Terminals (ADT)
Si aad u hubiso in Abu Dhabi Terminals (ADT) ay leeyihiin fursado shaqo oo cajiib ah. Tusaale ahaan shirkadda Dekadaha waxay maamushaa oo maamushaa Khalifa Port iyo maareeyayaasha HR shaqaalaysiinta fursadaha mihnadeed ee Weelka. Xaaladahaas oo kale, Shirkadda Dekadaha ee Abu Dhabi ee maamusha mid ka mid ah saldhigyada tikniyoolajiyadeed ee ugu teknoolajiyadda badan ee Imaaraatka iyo mid ka mid adduunka ugu wanaagsan.
Sababtaas awgeed, dekeda ayaa si rasmi ah loo furay bishii Diseembar 2012. Guud ahaan marka laga hadlayo, Dekadda Abu Dhabi waa Shirkad Wadaag Ganacsi Gaar ah. Mudada fog, Xukuumadan dekada waxaa leh maamulayaasha sare ee Abu Dhabi iyo dad kale oo yar oo ka mid ah kaabayaasha kaabayaasha United Arab Emirates.
Shirkadda Dekedaha ee Abu Dhabi waxay shaqaalaheeda siisaa fursad ay ku helaan mid ka mid ah suuqyada ugu dhaqsaha badan adduunka ee Bariga Dhexe. Si kasta oo ay ahaataba, murashax kastaa oo la shaqeynaya shirkadan wuu shaqeeyaa heerka sare ee Imaaraadka. Asal ahaan shirkaddan dekeda ah, waxaad ku biiri doontaa kaabayaasha xirfadaha dekedaha adduunka ee heer caalami ah. Sidoo kale, waad awoodaa ka shaqeeya shirkaddaan sida haween u safreysa.
Xirfadaha Dawlada ee Dubai - Abu Dhabi Ports Company.
Shaqooyinka Abu Dhabi Shirkadda Shidaalka Qaranka
Shirkadda Batroolka Qaranka waxay bixisaa fursado shaqo oo xiiso leh oo ku yaal Abu Dhabi iyo Dubai. Marka la eego qodobbada, tan shirkad dowladeed oo bixisa jawi shaqo oo abaal-marin leh ee suuqa Bariga Dhexe. Waxaa jira shaqsiyaad badan oo socdaalaya adduunka. Sida lagu xusay shirkadaha Shidaalka Qaranka oo shaqaaleysiiyay madaxda sare iyo shaqsiyaadka. Inta badan, waxaad ku ogaan kartaa awoodooda buuxda adigoo codsanaya website-kooda. Guud ahaan, bilaabista xirfad leh iyaga waxay kaa caawineysaa inaad qaabeyso mustaqbalka ee qaybta tamarta ee Abu Dhabi.
Wakhtigan xaadirka ah ee shirkaduhu ku shaqeeyaan ee ku dhisan a Nidaamka waxqabadka-dhaqaajiya. Waqti ka waqti waxaad ka heli kartaa jagooyin fuliyayaal shirkad ah. Sida iska cad, maxaa yeelay shirkadda shidaalka ee Qaranka waxay maal gashaa dadkeeda. Mar dhow ama hadhow abuurista jawi shaqo oo abaal marin leh shirkaddan gudaheeda waa jid loo maro guusha.
Safka hore, shakhsiyaadka ku biira shirkadaas saliida waxaa lagu qiimeeyaa fikradooda iyo tabarucaadooda. Isla mar ahaantaana, shirkadda waxaa la siiyaa Fursad ay ku gaadhaan himiladooda buuxda ee xirfad-doon kasta ee Abu Dhabi. Ilaa iyo hada, shirkadda shidaalka ee qaranka waxay dadka ka dhigtaa qeexitaankeena ganacsi. Marka la eego qodobbadaas, dadka ajnebiga ahi waa furaha guusha shirkaddaas Batroolka. Guud ahaan kahadalka shaqooyinka Abu Dhabi. U oggolow, in si kale loo dhigo, iyada oo la qaadanayo qaab mustaqbal xirfadeed leh hay'addan xirfadeed ee Abu Dhabi horumarka Imaaraadka.
Daryeelka Dawladda ee Dubai - Ku sii Deeqid Resume Shirkadda Shidaalka Qaranka.
Kooxda Warbaahinta Carabta ee Imaaraadka Carabta
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad ku xasuusato markaad cilmi baaris ku samayso waaxda warbaahinta Carabta. Si aad u tilmaanto sababta aad u codsaneysid shaqo bilaash ah MBA. Sababtoo ah Shirkadda Warbaahinta Kooxdaan waxaad ka heli kartaa mid ka mid ah kuwa ugu fiican dalabaadka shaqo ee gobolka Sucuudiga. Markay sidaa tahay shaqo helista shirkad madadaalo oo hogaamisa. Ayaa hada loo shaqaaleysiiyaa raadiyaha raadiyaha ee Imaaraadka? Shirkadda raadineysa xubnaha shaqaalaha da'da yar ee maareynta dhacdada iyo suuqa madadaalada qoyska sidaas waa mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee xirfadda lagu bilaabo.
Sidaa awgeed, Kooxda Warbaahinta Carabta (AMG) waa urur ka kooban Dubai oo caan ah. Inta badan caddaynta ah in kooxda warbaahinta ee Carabta ee Imaaraadka Carabta. Ma tahay caasimad ku salaysan suuqa saamiyada oo ay ku wadaagaan Dubai Holding. Sababtoo ah shirkadda madadaalada furitaanka shirkad cusub oo Imaaraad ah runtii waa u qalantaa inaad ku soo biirto. Xilligan la joogo waxay leeyihiin shaqooyin dhawr ah oo loogu deeqo websaydhka.
Guud ahaan, AMG waa ku hawlan sameynta shaqaale dibadeed ee Dubai. Qeybta ugu badan, shirkadan heerka koowaad ah waxay ku dartay nidaam shaqo oo aad u wanaagsan. Soo koobid shirkada madadaalada way fiicantahay hadaad raadineysid shaqo suuqgeyn Dubia. Xaqiiqdii, waxaad ka heli kartaa fursadaha maaraynta gudaha Global Village. Falanqaynta ugu dambeysa, Arab Media Group waxaa la aasaasay bishii Maarso 2005 sidaa darteed waxay leedahay joogitaan xoog leh Dubai. Kooxda Warbaahinta Carabta ee laga leeyahay dalka Isutagga Imaaraatka carabta ayaa leh wax la yaab leh iyo shaqaale aad u weyn oo ku takhasustay suuq gaynta Dubai.
In shirkad kooban oo ka mid ah shaqaalaha shirkadaha summariga sare. Ilaa waqtigan xaadirka ah shaqaalaha 320. Waxaa loo shaqaaleeyaa saddexda suuq geynaya xafiisyada Dubai. Daryeelka Dawlada ee Dubai - Ku Bixi Dib-u-Dejinta Madaalada Dubai.
Shaqooyinka ku jira caymiska Daman iyo goobaha caafimaadka
Daman ilaa waqtigan xaadirka ah si joogto ah ayuu u raadiyaa xirfadle khibrad u leh xirfad dhexe. Iyada oo aan dib loo dhigin shirkadda raadineysa musharixiinta hanuuninta caymiska. Gudaha xarunta beeraha, waa inaad boos ka codsataa shirkadda caymiska Daman. Dhanka kale, haddii aad waayo-aragnimo fiican u leedahay CV-ga waxaad kaloo noqon kartaa musharrax qiimo leh qaybaha ganacsiga guud sidoo kale.
Shirkadda Daman waa khabiir ku xeel dheer caymiska caafimaadka. Waxaad si fudud ugu adeegsan kartaa iyaga adigoo soo dejinaya a telefoonka gacanta codsi. In aan waxba laga dhihi xiriirada dawlada Shirkad ku taal Abu Dhabi sidaa darteed ururkani waa shirkad amaan ah oo shaqeysa. Xaqiiq ahaan, Caymiska Daman wuxuu bilaabay hawlo bishii Maajo 2006. Caddaynta ugu badan ee qasabka ah ee u qalma in lala shaqeeyo waa in ay leeyihiin wax kabadan shaqaalaha 1100. Waad awoodaa Google ee Michael Bitzer the CEO ee Daman ama isku day si ay ula xiriiraan shirkadda ku taal Linkedin.
Meel kale oo muhiim ah Daman waxay bixisaa caymis caafimaad oo kala duwan jagooyinka ka sarreeya Dubai City iyo Gulf. Sababtaas awgeed, markii aad shaqo ka hesho waxaad ka heli kartaa qorshayaasha mushaharka cajiibka ah oo leh gunnooyin dheeri ah. Dhanka togan, shirkaddu ma leh xaddido iyo caymis ballaaran oo juquraafi ah sidaa darteed kama shaqeyn kartid UAE kaliya.
Dawladda Hoose ee Dubai - Ka sii deyn rafcaankaaga Daman.
Shaqooyinka magaalada Dubai
Guud ahaan, Dubai Holding waa shirkad maalgelin caalami ah. Iyo mid ka mid ah shirkadaha ugu wanaagsan Bariga Dhexe. Shirkadda waqtigan xaadirka ah soo saaraysa shaqaale kasta oo cusub oo ku biiri doona kooxdooda. Ilaa waqtigan xaadirka ah, Dubai Holding waxay ka dhiseysaa jardiinooyin ganacsi oo gaar ah UAE. Dabcan, shirkadda horumariyo maalgashiyo la yaab leh oo ay maareeyaan shirkad weyn oo lagu qiimeeyo oo caan ku ah Bariga Dhexe oo inta badan diiradda saaray qaybta maalgashiga.
Dhab ahaantii, markaad baarista shaqooyinka waxaad heli kartaa fursadaha shaqo ee adeegyada maaliyadeed iyaga la. Iyada oo ay weheliso suuqa dhismaha iyo ganacsiga martida ee Dubai Holding oo bixinaya mid ka mid fursadaha shaqo ee ugu wanaagsan. Dhanka kale, murashaxiinta isgaarsiinta ayaa sidoo kale lagu soo dhaweynayaa inay ku soo biiraan Qabashada Dubai.
Shirkadda Dahabshiil oo dhan waxaa lagu aasaasay 2004. Guud ahaan, Hayaashadu waxay abuuraysaa hawlo wadamada 12-14 iyo shaqaalaynta dadka 25,000 ee Imaaraadka Carabta. Dubai Holding waa urur maalgashi oo weyn oo maareynaya 16.8 Milyan AED. Ilaa illaa iyo haatan xawaaladaha bilyan ee xawaaladaha ee hantida maamula madaxda sare. 130 Billon AED faa'iido nadiif ah.
Daryeelka Dawlada ee Dubai - Ku sii Dallest Dib-u-dejinta Dubai Holding.
Shaqooyinka magaalada Dubai Internet City
Dubai Internet City ayaa sii wadaysa mashaariic badan oo ka mid ah Imaaraadka Carabta. Guud ahaan, Taageerada Internetka ee Dubai Ganacsiga Guud ee Wadamada GCC. Waqti dheer, Beerta Internet-ka ee Magaalada Dubai waxay soo jiidataa magacyada maalgashiga ugu fiican. Iyo sida xaqiiqda ah shirkadaha Fortune 500 ee gudaha magaalada Dubai. Ilaa iyo hadda kobcinta xirfadaha maxalliga ah iyo abuurista koox maareyn habboon oo loogu talagalay Internet City waa waxa dadajiya in la helo.
Inkastoo tani ay noqon karto runta Internetka ee magaalada Dubai. Leeyahay jawiga ugu wanaagsan ee riwaayadaha iyo ganacsatada Dubai. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, shirkaddu waxay abuurtay mowjadaha xiga ee maalgashiga hoteelka. Xaaladdan oo kale hal-abuurka Dubai iyo Abu Dhabi ayaa samayn doona ku koraan dhammaan Bariga Dhexe gaar ahaan on Expo 2020. Daryeelka Dawlada ee Dubai - Ku soo Dhig Codsigaaga Dubai Dubai Internet.
Shaqooyinka ku yaal Dubai Park Park
Waa muhiim in la ogaado in Beedka Aqoonta Dubai waa meel caan ku ah ganacsiga adduunka. Caddaynta ugu badan ee qasbaya shaqo raadinta. Shirkadda ma tahay aagga keliya iyo aagagga keliya ee bilaashka ah ee loogu talagalay maaraynta Kheyraadka Aadanaha ee ganacsiga internetka ee Dubai. Si loo tilmaamo helitaanka qandaraaska shaqada ee shirkadaha saldhiggoodu yahay Dubai Shabakadda Internetka. Marka loo eego duruufahaas mid kasta oo ka mid ah meeraha cusub ee waxbarasho ee udhaxeeya Emirates.
Guud ahaan, shirkadda waxaa lagu maalgeliyey 2003 iyada oo qayb ka ah TECOM Group. Sida kor ku xusan, Xarunta Aqoonta ee Dubai waxay bixisaa maareynta ganacsiga iyo kaabayaasha shirkadaha. Marka la eego qodobbadaas, shirkaddu waa u wanaagsan tahay warshadaha u habboon ururada cusub. Shuruucda qaybta ugu badan iyo shabakad taageero dheeri ah oo ku taal magaalada Dubai waa wadnaha ganacsiga.
Beerta Aqoonta ee Dubai waa shirkadaha ugu wanaagsan shirkadaha dhexmara shirkadaha ugu sareeya ee Imaaraatka. Dhanka kale, DKP waxay daboolaysaa aag dhan 1 milyan oo fiit laba jibbaaran oo diyaar u ah in loo isticmaalo shirkadaha cusub iyo dabcan bilow cusub. In kasta oo ay tani dhab noqon karto 95,2 kun oo mitir murabac ah oo ganacsi saafi ah. Sababtaas awgeed, waxaa jira shirkado badan oo yaab leh oo UAE ah oo ku yaal meel u dhow Palm Jumeirah, Mall of Emirates, Emirates Hills, iyo Dubai Marina. Xaaladaas, waxaa jira habka ugu fiican si loogu diro resumeyaal loogu talagalay fursado shaqo oo cusub Dubai. Hawlaha Dawladda ee Dubai - Ku soo Dhow CV-gaaga Dubai Park Knowledge.
Xirfadda Dubai Media City
Dubai Media City (DMC) guud ahaan waxay ku hadashaa hay'adan cajiibka ah. The Dubai Media City waxaa lagu maalgeliyey 2000. Xaaladahaas oo kale, DMC waxaa la bilaabay Emirates. Aragtida guud waa in lagu horumariyo xarunta warbaahinta ee Dubai. Si aad uhesho qaab kale, shirkadda raadisa khabiirada isgaarsiinta. Khudbado ka socda adduunka oo doonaya in ay xirfad ku qaataan Dubai. Sababtan awgeed, shirkadda Dubai Media City ayaa ugu wanaagsanayd gobolka Bariga Dhexe.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay in la xasuusto tan iyo markii la furay ganacsiga DMC. Warbaahinta oo dhan ganacsiga Dubai wuxuu ka dhashay ilaa 2000 oo ah bulsho warbaahinta kobcaysa. Maalmahan shaqooyinka Expo 2020 waa kuwo aad u fiican la qabsanaya Dubai Media City. Dhinaca ganacsatada dhinaca togan tusaale ahaan Qeybaha Muusikada. Waxaa sii dheer shaqooyinka cusub ee Warbaahinta. Wadajir oo leh madadaalo madadaalo iyo madadaalo oo ku yaal Dubai. Xirfadda warfaafinta ayaa sidoo kale lagu heli karaa filimaanta iyo hay'adaha macluumaadka. Xaqiiqdii, Warbaahinta Dubia shaqaalaynta hadda loogu talagalay maamulayaasha adeegyada suuqgeynta.
Inkastoo tani ay noqon karto mid run ah oo ku yaal magaalada Media Media Xarumaha Ganacsiga. Intaa waxaa dheer in ay abuurtay dad badan mashaariicda aad ku biiri karto moobaylkaaga. Isla markiiba, waa in aad kor u qaaddid CV-gaaga. Sababtoo ah maareeyayaasha hibada leh ee hibada leh waxay eegayaan faahfaahintaada shaqo. Sida xaqiiqda ah, ganacsi-abuurka gobolka sidoo kale waa mid aad u habboon hadaad jeceshahay inaad furato ganacsi kuu gaar ah. Maaha in la xuso xarumaha gaarka ah ee magaalada Media Media kuwaas oo lagu bartilmaameedsaday shaqaale cusub.
Xirfadaha Dawlada ee Dubai oo leh Dubai Media City.
Shaqada Dubai World
Haddii ay dhacdo inaad tahay qof shaqo la’aan ah. Shirkadda caalamiga ah ee gacanta ku haysa, Dubai World waa sida ugu wanaagsan ee shaqo lagu helo. Si loo dhigo mid kale oo ah World World waxay diiradda saareysaa murashax kasta oo cusub. Waxaa muhiim ah in la ogaado in meelaha kobcinta istiraatiijiyadeed ee Dubai ay ka mid yihiin fursadaha shaqo ee Gaadiidka & Saadka. Gaar ahaan waxaad si sahlan u bilaabi kartaa shaqo cusub on Drydocks & Maritime la shirkadaan. Intaa waxaa dheer, waxay ku fekereysaa helitaanka shaqo aad u wanaagsan oo leh mashaariic horumarineed oo mashaariicda injineerada ah.
Fursadaha dhinaca maalgashiga ah ee maalgashiga maalgashiga iyo fursadaha shaqada iyo adeegyada maaliyadeed ee la xiriira, way adag tahay in la helo. Sababtoo ah wareysiga Dubai World waa mid aad u adag in loo gudbo boosaska maaliyadeed. Muuqaal aad u muhiim ah oo la yidhaa Dubai World portfolio maalin kasta. Xirfadaha dowladda ee shirkadan waxaa ka mid ah qaar ka mid ah shirkadaha hormoodka adduunka ee ganacsigooda halkaas oo aad ka heli karto dalab shaqo. Caddaymaha ugu adag ee Dubai World waa u qalantaa in ay isku daydo waa farsamooyin xooggan. Guud ahaan waxaa ka mid ah resume ama xitaa tilmaamaya Linkedin waa caqli habka loo helo dalab shaqo oo loogu talagalay dadka ajaanibta ah ee Pakistan.
Dubai World ayaa ku guuleysatay hanaanka sare ee loo qoondeeyay si ay u abaabulto ururka adduunka ee Dubai. Isla mar ahaantaana, waxqabadyada asaasiga ahi aad ayay u fiican yihiin dadka ka shaqeeya xirfadlayda. Soonerka ama maal-galinta shirkadaha Dubai ayaa u oggolaanaysa inay hore u sii wataan suuqa Suuqa Caalamka iyo ganacsiga aduunka oo dhan.
Daryeelka Dawlada ee Dubai - Ku Bixintaada Dib u noqoshada Dubai World.
Garoonka Diyaaradaha Duba
Mustaqbalka wuxuu ka bilaabmayaa Dubai Airport Xirfadle. Shaqooyinka garoonka diyaaradaha ee Dubai waa hab aad u wanaagsan oo lacag looga sameeyo UAE. Ilaa iyo hada Madaarka Caalamiga ah ee Dubai waxay leeyihiin fursado shaqo. Waxaad ku bilaabi kartaa shaqada adigoo ah darawal uber ah ama fuliyaha iibka. Ama waxaad noqon kartaa tababar Tababaraha kooxda waxaana loo dallacsiinayaa jagada maareeyaha sare. Xilligan xaadirka ah waa garoonka diyaaradaha ee Dubai waa madaar caalami ah oo caalami ah oo u adeega magaalada Dubai.
Si dhakhso ah ama goor dambe ayaad noqon doontaa ku nool magaalada Dubai waxaad noqotaa ku faana adeegsadaha adeegyadooda ee Imaaraadka Carabta. Markaa inaad shaqo ka hesho Madaarka Dubai sidoo kale waa bartilmaameedkaaga. Ilaa waqtigan xaadirka ah, waa inaad isku daydaa inaad noqoto musharax garoonka diyaaradaha mashquulka badan ee adduunka. Waqti ka waqti waxaad wajihi kartaa fuliyayaal caan ah safarkooda caalamiga ah ee rakaabka.
Jidka hore ee garoonka Diyaaradaha Caalamiga ah ee Dubai World Mak-Al Maktoum adiga ayaa ku sugaya. Xaqiiqda layaabka leh ayaa ah Madaarka Caalamiga ah ee Dubai. Gudaha xarunta ganacsiga Emirates waa garoonka labaad ee ugu mashquulka badan Aasiya. Ilaa iyo waqtiga xaadirka ah ee garoonka diyaaradaha ee Dubai oo u adeegaya wadarta rakaabka (85,654,250) sanadkiiba.
Daryeelka Dawlada ee Dubai - Ku Bixi Dib-u-Dejinta Madaalada Dubai.
Waaxda Dhulka ee Dubai
Waaxda dhulka Dubai ee dalka UAE waxay dalka UAE u samaysay dhul fursad u ah ganacsiga. Loogu talagalay qaranka wadaniga ah iyo Hindisaha Caalamiga ah. Waxay ka dhigeysaa alaab iyo nolol hufan qof walba. Waaxdan hawgalka Dubai Land ayaa la furay albaabada loogu talo galay qurbaha shisheeye. Waxa jira dhisme dhisme oo ay Dubai ku maamusho. Shirkadan Emirate-ka gaadhay heerarkii aan hore loo arag ee guusha shaqo ee Dubai iyo Abu Dhabi.
Dib u dhac la'aan, ugaarsade kasta oo shaqo oo ka yimaada Hindiya ayaa barakaysan la leh shirkadan. Taliyayaasha fuliya raadinta shaqo adag iyo dadka ka go'ay Koonfur Afrika. Yaa jeclaan lahaa inuu ku soo biiro shirkadan macaamiisha ah ee muslinka ah? Tan iyo markii ay 2000 ugaarsato xirfadlayaal cusub oo u yimaada Dubai. Taasi waxay u oggolaaneysaa New Dubai Expats inay gaarto heerka shaqo ee heerka sare ee Emirates.
Qeybta Dubai Land waxaad ka heli kartaa jagooyinka hormarinta mashruuca. Iyo gadaasha, waad horumarinkartaa intaad dhaaftay. Mudada fog horumarka horumarka dalka. Doono xaqiiqdii abuuro dalabyo badan oo shaqo.
Daryeelka Dawlada ee Dubai - Soo Saarista Dib-u-dejintaada Shaqooyinka Dawladda.
Shaqada Emirates Airline
Raadi fursadaha leh kooxda Xiriirka Shaqada ee Emirates. Marka loo eego xaaladahaas, kooxda Imaatka ah waxay bixisaa lacag aad u badan oo lacag leh fursadaha shaqooyinka iyo wareysiyada socodsiinta. Guud ahaan marka laga hadlayo, waxa ku saabsan shaqada sida la xusay kooxda Emirates Group waxaa gebi ahaanba iska leh dawladda Dubai. Xaqiiq ahaan shirkad maalgashi oo xaqiiqo ah Dubai had iyo jeer waxay raadisaa shaqaale cusub.
Dhanka kale, haddii aad raadineyso ujeeddada ka mid noqoshada duuliyayaasheeda. Falanqaynta ugu dambeysa helitaanka booska injineernimada waa dhaqaaq caqli badan. Waqtigan xaadirka ah Emirates raadinta shaqooyinka qaranka. Hay'adda Emirates Group Career waxay u heellan tahay shaqaalaynta iyo hagidda inta badan muwaadiniinta UAE. Si kastaba ha noqotee, haddii aad tahay shaqo doone caalami ah iyada oo aan dib loo dhigin codsigaaga Emirates.
Dhanka kale, waa wakhti maalgashi. In kabadan magaalooyinka 150 ee wadamada 83 ee lix qaaradood. Xaqiiqdi waad awoodaa shaqo ka hel Emirates. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad la xiriirto maareeyayaasha HR oo aad u dhawaato.
Ujeedada loogu talagalay horumarinta shaqo ee shaqo doone kasta. Imaaraadku had iyo jeer wuxuu gacan ka geysanayaa kobcinta ganacsiga qaab ay dawladda Dubai u abuurto had iyo jeer. Si kale loo dhigo, bay'adda duulimaadka ee Emirates Air markasta waxay dhiirrigelisaa wada shaqeynta. Daacadnimada Dubai Royal Familly waa shardi haddii aad la shaqeyso. Iyada oo fiiro gaar ah la siinayo faahfaahinta iyo ka go'naanshaha horumarka waa wadada loo maro shaqada Emirates. Waa in la xasuustaa kor u kaca ururka waa hab deg deg ah iyo guul.
Shirkadda Shidaalka Shidaalka ee Emirates
ENOC - Shirkadda shidaalka ee Emirates ayaa soo bandhigtay fursado shaqo oo balaaran oo ka jira Dubai. Si kale haddii loo dhigo, haddii aad raadinayso shirkado badan oo kala duwan oo leh hanti xoog leh. Saliida Emirates Oil ayaa ah doorashada ugu fiican iyo waxa ay leedahay leeyihiin qaab dhismeedka xirfadeed ee horumar xoogan. Horumarinta raasamaalka aadanaha iyadoo lala yeelanayo shirkadda ENOC kor u qaadista wacyiga ayaa ah Isutagga Imaaraatka Carabta.
Ujeeddadan oo kale, Shirkadda Shirkadda Qaranka ee Imaaraadku waa hay'ad caalami ah oo loo yaqaan '21st-qarnigii' oo leh dhaqaalo soo koraya. Heerka sarreeya Sheikh Mohammed bin Rashiid Al Maktoum. La-talin shakhsi ahaaneed iyo waqti ka waqti booqashada xafiiska madaxa ee Magaalada Dubai.
Emirates waxay naftooda ku faanayaan deegaanka shaqada dhaqamada kala duwan. Safka hore, waxay marwalba soo dhoweynayaan qarashyo cusub oo ENOC ah. Shirkadda ayaa higsaneysa dhiirrigelinta hal-abuurka Maareynta Kheyraadka Aadanaha. Ka soo horjeedda horumarka shirkadaha kale ee shirkadda oo dhan waqti ayey qaadataa. Marka ugu sarreysa, haddii uu Enoc leeyahay tababbarka maareynta tayada wanaagsan ee Xarunta Dubai.
Kulliyad Dawladeed ee Dubai - Ku sii Dallacsiintaada ENOC.
Shaqooyinka Emirates Post
Asalka Imaaraatka Post waa mid ka mid ah shaqalaha rasmiga ah ee boostada u shaqeeya Imaaraadka Carabta. Isla mar ahaantaana, waa qayb ka mid ah Kooxda Dawlada ee Imaaraatka. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waa inaad ogaataa in guud ahaan shirkadda la bilaabay Agoosto 19, 1909. Si loo dhigo hab kale, shirkaddu waxay bilawday inay maamusho Adeegyada Boostada Hindiya illaa madaxbanaanida Hindiya ee 1947. Shirkadda ayaa leh goobta shaqada ee gaarka ah meesha aad iska diiwaan gelin karto. Dhinaca togan, waxaad ka heli kartaa heeganka shaqada iyaga.
Hawlaha Dawladda ee Dubai - Ku sii dir Resign Resource Group.
Etihad Airways Career ee Abu Dhabi
Etihad Airways waa mid ka mid ah daroogada safarka ee Abu Dhabi. Shirkadda ugu fiican ee shirkadda Etihad Airways - waa in la xusuusto. Shirkaddaas ayaa ah shirkadda labaad ee ugu weyn ee Imaaraadka Carabta ka dib markii ay Emirates Airline ku jirtay. Haddii aad jeclaan lahayd si ay u bilaabaan xirfad cusub sidoo kale hoteelka iyaga la. Waa inaad gaartaa xafiiska madaxa waa Khalifa City, Abu Dhabi, oo u dhow garoonka caalamiga ah ee Abu Dhabi. Laakiin sida ugu fiican ayaa ah in laga diiwaangaliyo internetka ama ka raadi maareeyaha HR Linkedin lana xiriir.
Duruufahaas oo kale, Etihad waxay biloowday hawlgal Noofembar 2003. Tan iyo markaas waxay ku koraan shirkadaha ugu fiican Abu Dhabi. Si loo soo koobo shirkadaha diyaaradaha waa mid ka mid ah shirkadaha ugu wanaagsan isla markaana ka shaqeeya in ka badan duullimaadyada 1,000 toddobaad kasta. Etihad Airways waxay ka caawineysaa inay daboosho rakaabka 120 iyo meelaha xamuulka qaada ee Bariga Dhexe, Afrika, Europe, Aasiya, Australia iyo qaaradaha Ameerika.
Daryeelka Dawlada ee Dubai - Ku sii Deeqo Dajintaada ETIHAD.
Shaqooyinka Fly Dubai
Shirkad kale oo muhiim ah oo ka tirsan warshadaha Diyaaradda waa Fly Dubai. Waxaad iska qori kartaa digniinta shaqada Fly Shirkadda Dubai. In wax laga sheego kartidooda bulshada ee warbaahinta bulshada. Haddii aad u muuqato inaad si dhakhso leh u kobceyso heerarka xirfadaha. Isku day inaad ka dalbato FlyDubai. Iyo ku dar faahfaahintaada digniinta shaqada ee Dubai xitaa shaqooyinka amniga. Isla mar ahaantaana, waxaad had iyo jeer ogaan doontaa dhaqanka Dubai markii aad ku biirto shirkadda. Iskusoo wada duuboo, flydubai waxay kuu heli doontaa fursadda ugufiican adiga. Meelna booska aad raadineyso. Meesha shaqadani way ku caawin kartaa. Shirkadda Shirkadda HR, Suuqa iyo shaqaalaha guud.
Iyadoo maskaxda ku haysa xirfad cusub oo xirfad leh oo ku yaal Abu Dhabi iyo Dubai. Maareynta Shaqooyinka ee FlyDubai u sii wado ganacsiga hore. Isla markiiba, shirkaddu waxay ogaataa in dadka Hindida ah waa shaqaale fiican. Europe waa hantida ugu muhiimsan ee horumarinta xirfadaha. In kasta oo tani ay noqon karto mid run ah oo lagu gaaro kartidooda buuxda ee shirkadda waa furaha.
Daryeelka Dawlada ee Dubai - Kuugu Dallacsiintaada FlyDubai
Garoonka Diyaaradaha Dubai - Diyaarad DXB
Madaarka Caalamiga ah ee Dubai ayaa hadda cusboonaysiiyay websaydhkooda, waad ku daawan kartaa boggooda internetka ee la cusbooneysiiyay. Halkaas waxaad ka heli kartaa hage xiiseeya oo kirada ah baabuur iyo huteelada hudheellada dusha sare ee Madaarka.
Fursadaha shaqada ee KIZAD
Fursadaha cusub ee KIZAD. Waxaa jira dhowr mashruuc oo ay shirkaddu bilaabatay. Shirkaddu waxay haysaa oo horumarisaa degaanka iyo khibrad caalami ah oo caalami ah oo leh khibrad Automotive. Sida xaqiiqda ah, KIZAD waxaa abuuri doona mashaariicda cusub ee Abu Dhabi. In la dhiso dhaqaalaha aqoonta waari kara. Inkastoo tani ay run tahay waqtiga dheer. Aragtida shirkadda KIZAD ayaa abuuri doonta oo horumarin doonta ganacsiga tartanka caalamiga ah ee Abu Dhabi.
Kizad oo bixiya fursado aad u wanaagsan. Gaar ahaan loogu talagalay fresher cusub. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo. Xaqiiqdii waa inaad tixgelisaa. Xirfadaha Dowladda ee Dubai. U dir Resign Resize to KIZAD.
Shaqooyinka DP World ee Imaaraadka Carabta
Shirkadaha kale ee dowladaha kale. DP World waa hogaamiye hormood ah ee suuqa ganacsiga adduunka. Intaa waxaa dheer, shirkadu sidoo kale waa qeyb ka mid ah qaybaha kaydka ee shirkadaha maalgashiga dowladda. Si aad u dhigto hab kale, u ogolow si fudud. Xirfad la leh adduunka DP waa mid cajiib ah. Qodob kale oo muhiim ah oo la leh shirkadan waa a sida ugu dhaqsaha badan si aad shaqo u hesho. Shirkadda dhinaca wanaagsan ayaa mar walba hubaal ka dhigta ganacsiga. Shaqaalaha xamuulka ah waxay sii wadaan shaqaalaha cusub inay u wareegaan heerka maamulka sare.
Qodob kale oo muhiim ah oo loogu talagalay dadka raadinaya shaqo ku sugan Dunida DP. Dadku waxay leeyihiin waxyaabo ay u baahan yihiin si ay kor ugu qaadaan shirkadda. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo sida shaqaale Philipino cusub, waad maarayn doontaa. Dhab ahaantii waa door muhiim ah silsiladda caalamiga ah ee Imaaraadka. Muhiim in la ogaado in DP World ka caawineyso shaqaalaheeda gaarka ah dhaqaalaha ayaa koraya jagooyinka muwaadinimada dhexdeeda.
Xaaladahaas oo kale, waa muhiim inaad isku daydo inaad shaqo la hesho. Sababtan awgeed, shirkaddani waxay u baahan tahay maareyn caqli badan. Dhanka kale, sharaf iyo sharaf leh dadka ajaanibta ah ee ka shaqeeya dhamaanba Imaaraadka Carabta. Dhanka kale, dadku kama cabsanayaan ku biiraan Xirfadaha Dawladda ee Dubai. Intaa waxaa dheer, Soo-dejintaada Dib-u-dajinta hoos.
Soo dir Resume Shaqada Dowladda ee Dubai!
Ma rabtaa inaad hesho a Shaqada Dubai inkastoo ay tani run tahay waxaan ku caawin karnaa. Dhinaca kale, waa inaad sidoo kale eegtaa shirkadaha shaqaalaynta gaarka loo leeyahay. Sababtoo ah waxaa jira shaqooyin badan oo ka shaqeeya qaybtaas. Halkan waxaan haynaa a Mashruuca shaqo raadinta ee ugu sarreeya Dubai iyo Websaydhka caalamiga ah ee qorista. Runtii aad ayay muhiim u tahay inaad dalbato CV-gaaga. Halkaan oo kaliya ku dhicin codsiga. Waxay qaadan doontaa wax ka yar laba daqiiqo. Weligana ha ogaan, marka shaqooyinka cusubi ay yimaadaan Gacanka.
Iyadoo shirkadda Dubai City aad bilaabi kartaa xirfad cusub ee The UAE!.